About Us - Zhao Hongsheng bacaha ningax Co., Ltd.
Shenzhen Zhaohongsheng boorsada saaraha waxaa la aasaasay sanadkii 2008 sida taxer dabiiciga ah. Waxaa jira warshad-laan sub magacaabay Shenzhen Zhaohongsheng dahaaran luggle iyo shirkadda bacaha. waxyaabaha Our waa bacda kaamerada, bacda pizza, bacda gaarsiinta cuntada, bacaha pizza kulul, bacda mindi, jeebka biilka makhaayad, Menu clip. waxyaabaha Our ballaaran yihiin arjiga cuntada, daawada, cunto fudud, silsilad qaybinta qabow. Tani waa enterpriser horrayn on design iyo soosaaraan dahaaran bacaha gaarsiinta cuntada. Waqtigan xaadirka ah waxyaabaha our ayaa wax walba ka sarreeya geeska suuqa Chinese, iyo dhoofiyo adduunka oo dhan.
waxaad ka arki kartaa waxyaabaha our meel Shiinaha market.volving kala duwan gudbiyay iyo dhoofinta oversea ee dunida. Waxaan la hayo iskaashiga dheer cunto fudud iyo silsilad qaybinta qabow stably. The "Zhaohongsheng" bac inthermal brand qoto dheer ahaa qalbiga dadka gelin. Tayada wax soo saarka iyo adeega la dhigay by bulshada.
Iyadoo suuqa ballaariyo si joogto ah, warshadda asalka ah waa adag tahay in looga baahan yahay ka macaamiisha. Our warshad loo soo wareejiyay in No 35, Anxing Road, xafiiska wadada Henggang Shenzhen on May 2017.It waa sidoo kale-ku yaalla oo si sahlan ay helaan (ku haboon xaalada). Goobta New heer sare heystey 5000 mitir oo laba jibbaaran siminaarka. Kaabayaasha The kaamil ah ayaa xarunta wanaagsan oo ay ku jiraan iyo deegaanka faa'iido for shaqada iyo nolosha.
Enterpriser goolkii: Professional, daacadnimada, bacaha isothermal supermarket, oo talanti oo ah xarunta tababarka
fikrad Enterpriser: Professional, niyad fiican, tayo sare leh, oolnimada sare, qiimaha ugu wanaagsan oo lagu kalsoonaan karo
Ujeedada Service: Iyada oo ku saleysan hal-abuurnimo farsamada loo marayo Warshadaynta oo baaxad weyn si loo yareeyo kharashka, ee tayada sareeya leh qiimaha ugu jaban iyo adeegga ugu kaamil ah la siin doonaa tayada ugu fiican, waxyaabaha hodan joogsila'aan
suuqa dhisan, hordhaca ah ee technology advanced, qalabka iyo shaqaalaha, oo xoogee R & D awood
Dhammaan bacaha ningax kaamerada in macaamiisha ka fikiri kartaa ee halkan ayaa laga helayaa
kasta oo bacaha isothermal ah wax kasta oo macaamiisha ka fikiri karaa in halkaan laga heli doonaa
Cinwaankaaga: No 35, wadada henggang longgang degmada
Phone: + 86-755-84006330
ganacsiga Dibadda waa bilow wanaagsan, waxayna ahaayeen ...